Raridda iyo rarka
Taariikhda horumarinta kooxda
Khadadka wax soo saarka Warshadaha
Sida laga soo xigtay warbixintii ugu dambeysay ee CCTV, “bir-jeex-jeex” oo ay soo saartay Shiinaha Baowu Taiyuan Iron and Steel Group ayaa ka khafiifsan warqad, muraayad u eg, aadna ugu adag qaab dhismeedka. Dhumucdiisuna waa kaliya 0.015 mm. Xidhmada 7 go 'oo bir ah waa wargeys. dhumucdiisuna. Waa warbixin ...
1. Astaamaha khadadka biraha birta ah Khadka birta birta ah wuxuu leeyahay astaamaha ilaalinta deegaanka, iska caabinta daxalka, biyo -mareenka, iska caabinta abrasion, iska caabinta abrasion, iyo iska caabbinta cimilada. Dusha sare waa siman oo nadiif ah sida muraayadda. Waa qurxin heer sare ah ...
In kasta oo birta birta ah la sheegay in aan miridhku ahayn, haddana waa uun miridh la'aan. Waxay noqon kartaa oo kaliya mid waarta oo aan miridhnaanin marka si taxaddar leh oo taxaddar leh loo isticmaalo. Haddaba duruufo noocee ah ayay birta birta ah u fududahay in la daxalaysto? Ha kuu sheego Ganacsade Stainless! Haddii deegaanku uu yahay mid qoyan, markaa ...
Guddi qaboojiyaha birta birta ah ayaa ka fiican; Faa'iidooyinka guddi birta ka samaysan: 1. Iska -caabbinta daxalka: guddiyada biraha aan ka samaysan kuma daxalayn doonaan warbaahinta alkaline ee daciifka ah sida hawada, uumiga, iyo biyaha. 2. Waari kara: Guddi birta ka samaysan oo birta ah ayaa leh adayg sare, adkaysi leh oo aan fududayn in la dejiyo. 3. Beau ...
Dhawaan, Ururka Birta Adduunka (WSA) ayaa sii daayay xog ku saabsan wax soo saarka birta ceyriin ee adduunka bishii Juun. Bishii Juun, soosaarka biraha ceyriinka ah ee 64 dal iyo gobol oo lagu daray tirakoobka Ururka Birta Adduunka wuxuu ahaa 167.9 milyan oo tan, koror sannad-sannadeedkii ahaa 11.6%. Qeybtii hore ee o ...
Sida laga soo xigtay VR Sharma, oo ah agaasimaha maamulka shirkadda Jindal Steel and Electric Power Company (JSPL), Hindiya waxay ka sarreyn doontaa Shiinaha sannadaha soo socda waxayna noqon doontaa dhoofinta birta ugu weyn adduunka marka la eego ballaarinta awoodda, baahida biraha adduunka iyo xayiraadaha dhoofinta Shiinaha. “...
Saddex hab oo muraayadda lagu qurxinayo dusha birta birta ah
Geedi socodkeena biraha birta ah, mararka qaarkood macaamiishu waxay u baahan yihiin inay qabtaan daaweynta muraayadda. Waxaa jira saddex hab oo daweyn muraayad bir ah oo waaweyn, kuwaas oo ah nadiifinta farsamada, nadiifinta kiimikada iyo nadiifinta elektiroonigga. Hadda, waxaan u soo bandhigi doonaa si gooni gooni ah. 1. Poli makaanikada ...
Aaway meesha ugu weyn ee waxsoosaarka birta aan lahayn ee Shiinaha?
Aaway meesha ugu weyn ee waxsoosaarka birta ka samaysan? 1. Wuping, Fujian Sanado badan ka hor, Wuping Stainless Steel Park waxay lahayd dhisme qorshaysan oo ah 6,000 mu iyada oo wadarta maalgashiga 12 bilyan yuan. Waxaa jira dad badan oo u soo shaqo taga warshadaha biraha biraha. Sanadkii 2014, waxaa ...
Qodobbada ugu muhiimsan ee nashqadeynta derbiga muuqaalka dhulka
Darbiga muuqaalka biraha ee birta ah ayaa la sameeyay tobannaankii sano ee la soo dhaafay. Iyada oo ay ugu wacan tahay wax -qabadka aan la barbar dhigin ee birta birta ah, ayaa inta badan lagu arkaa qurxinta dhismaha. Waxaan qaddarin doonaa quruxdeeda jardiinooyinka, jardiinooyinka, fagaarayaasha iyo meelaha kale. Sameynta quruxda lama sameyn karo c ...
Suuqa birta birta ah ee Maraykanku aad buu u yar yahay
Heerarka wax -soo -saarka ee warshadaha biraha birta ee Mareykanka aad bay u hooseeyaan. In kasta oo isticmaalka birta uu si dhaqso ah u soo kabsaday ka dib hoos u dhaca uu sababay masiibada, soo -saarkii birta ayaa dib u bilaabmay si tartiib tartiib ah, taas oo dhalisay isku -dheelitirnaan weyn oo u dhaxaysa sahayda suuqa iyo baahida. Iibsadayaashu waxay soo sheegaan in dhowr darajo ...
Shirkadda weyn ee Kuuriyada Koonfureed ee POSCO ayaa macaashkeedu kordhay 1213% sanad-sannadeedka rubuca labaad, taasoo ka sarreysa 2 trillion oo lagu guuleystay markii ugu horreysay.
Wakaaladda Wararka ee Yonhap News Agency ayaa soo warisay 9-kii Julaay in shirkadda weyn ee Kuuriyada Koonfureed ee POSCO ay sii deysay warbixin waxqabadkeeda 9-keedii, iyadoo markii hore la xaqiijinayo in macaashka hawl-galka ee shirkadda la xoojiyay ee rubuc-labaad ay kor u kacday 1212.7% sannad-sannadeedkii illaa 2.2014 tiriliyan lagu guuleystay ( approxima ...
Turkiga wuxuu leeyahay cillad dhanka birta ah bilaha Janaayo-Maajo
Turkigu wuxuu leeyahay cillad dhanka birta ah shantii bilood ee ugu horreysay sannadkan, laakiin waxaa la filayaa in awoodda wax-soo-saarka birta cusub ee la bilaabi karo sannadaha 2-3 ee soo socda ay sii xaddidi doonto soo dejinta. Tirakoobkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay Ururka Soosaarayaasha Birta iyo Birta ee Turkiga (TCUD) ayaa muujinaya t ...
Dhibaatada ka jirta “dheeri”, Shiinaha waxaa laga yaabaa inuu mustaqbalka noqdo mid soo dhoofsada bir bir bir ah
Waxaa qoray admin on 21-07-09
Tan iyo 2010, Shiinaha wuxuu ahaa dhoofiyaha saafiga ah ee birta aan xarka lahayn 10 sano oo isku xigta. Si kastaba ha noqotee, walaacyada ku saabsan awood-darrada iyo ganacsiga "ka-hortagga-daadinta" tallaabooyinka dalal kala duwan ayaa ciriiri geliyay horumarka warshadaha birta ah ee birta ah ee Shiinaha. Xaaladdan ayaa la filayaa ...
Bartamihii-illaa-dabayaaqadii Maajo, iyada oo ay saameyn ku leeyihiin siyaasadaha degdegga ah, qiimaha birta gudaha ayaa si aad ah hoos ugu dhacay, taas oo dib uga noqotay kororkii labada bilood ee hore ee nus billaha ah. Tan iyo markaas, siyaasadaha xaddidaadda wax soo saarka iyo siyaasadaha xakamaynta ayaa sidoo kale ku dhaqmay suuqa birta, iyo qiimaha birta ayaa isu rogay ...
dalkaygu wuxuu diiradda saarayaa kor u qaadista hagaajinta qaabdhismeedka warshadaha birta shan qaybood
Waxaa saameeyay arrimo ay ka mid yihiin baahida suuqa gudaha ee xoogan, soo saarista birta ceyriin ee waddankeyga waxay haysaa koritaan deg deg ah sannadihii la soo dhaafay. 17-kii Juun, Komishanka Horumarinta iyo Dib-u-habeynta ayaa qabtay shir-saxaafadeed joogto ah bishii Juun. Meng Wei, afhayeenka Horumarinta Qaranka ...
101 mashruucyo waaweyn oo Foshan ah, oo ay kujirto soosaarka sanadlaha ah ee Lihe oo gaaraya 100,000 tan oo ah alaabada birta ah, ayaa biloowday rubuca labaad
Bishii Juun 28, bilowgii degdegga ahaa ee mashaariicda waaweyn ee rubuca labaad ee 2021 ee Gobolka Guangdong ayaa la qabtay. Meel xarun laan ah, Foshan isla mar ahaantaana xaflad dhagax-dhig ah ku qabtay goobta mashruuca ee Xarunta Wax-soo-saarka Wax-soo-saarka Sirdoonka ee Philips Water Health Smart Home Appliances Intelligence Base ee Shunde Di ...
World Steel Association waxay soo saartay warbixinta "World Steel Statistics 2021 ″
Ururka Caalamiga ah ee Birta Dunida ayaa dhowaan soo saaray "Tirakoobka Dunida Dunida ee 2021 ″ waxay muujineysaa in wax soo saarka biraha ceyriin ee adduunka ee sanadka 2020 uu yahay 1.878 bilyan tan, kororka 0.5% sanadkiiba, iyo heerka kobaca sanadlaha ah ee soo saarista birta ceyriin laga soo bilaabo 2015 ilaa 2020 waa 3.0%. Laga soo bilaabo per ...
Warshad lagu daweeyo bulaacada oo ku taal jardiinada birta ah ee warshadaha birta ah oo la isticmaalay
by idaacadda Subaxnimo 21-06-09
Waxaa laga bartay Beerta Waxsoosaarka ee Birta Birta ah Juun 21 Juun in sanado badan oo dhisme aad u daran ka dib, wajiga koowaad ee warshadda cusub ee lagu daweynayo wasakhda wasakhda ee baarkinka la dhammaystiray oo uu galay hawlgalka tijaabada iyo marxaladda hawlgelinta. Wax soo saarka jardiinada iyo bulaacada gudaha ...
ISSF: Bir aan xadi lahayn waa birta leh awoodda ugu koritaanka badan 70-kii sano ee la soo dhaafay
Daabacaadda 2021-ka ee "Tirakoobka Birta Birta ah" ee ay sii daayeen Madasha Caalamiga ee Birta Birta (ISSF) bishii Meey 27 waxay muujineysaa in laga soo bilaabo 1950 ilaa 2020, waxsoosaarka birta ee biraha ceyriin ee adduunka ka kordhay qiyaastii 1 milyan oo tan ilaa 50.892 milyan oo tan, iyadoo a c ...
Bishii Juun 1, 2021, Waaxda Ganacsiga ee Mareykanka ayaa soo saartay ogeysiis ah in la bilaabo baaritaanka ugu horreeya ee ka hortagga-daadinta qorraxda ee baaritaanka ku saabsan soo dejinta alaabada birta u adkeysata daxalka (Waxsoosaarka birta u adkeysata). Taiwan. Bir daxalka u adkaysta ...
ISSF waxay rajeyneysaa dalabka birta biraha ah ee adduunka inuu koro 9.0% ilaa 10.0% sanadka 2021
Tim Collins, Xog-hayaha Guud ee Madasha Caalamiga ee Birta Aan Xudduudka La Ahayn (ISSF), ayaa sheegay in isticmaalka biraha aan dunta lahayn ee adduunka laga isticmaalo sannadka 2020 uu hoos u dhici doono oo keliya 2% sannad ka sannad, laakiin ay jiraan kala duwanaansho ballaaran oo gobol. Isticmaalka guud ee Shiinaha wuxuu kordhay 6.5%, halka isticmaalka inta kale ee w ...
Waxaa la siidaayay qoraaladii rubacii koowaad ee shanta shirkadood ee birta waaweyn
Baaxadda shixnadda Anmi Steel ayaa kordhay 6.5% rubuc-rubuc 6dii Maajo, ArcelorMittal (oo hadda loo yaqaan Ami) waxay soo saartay warbixinteeda maaliyadeed ee saddexdii biloodba mar ah. Rubucii ugu horreeyay ee 2021, shixnadaha birta ah ee Anmi waxay gaareen 16.5 milyan tan, rubuc-rubuc kordhin 6 ...
Outokumpu: waa jaangooyo loogu talagalay horumar waara ee warshadaha birta ahama
Outokumpu waxay higsaneysaa inay noqoto jaangooyo loogu talagalay horumarka waara ee warshadaha birta ah, waxaa ka go'an hadafyo adag oo deegaanka ah, waxayna sameysay guddi talo bixin ah oo ku saabsan maaraynta deegaanka iyo bulshada (ESG). Outokumpu waxay cusbooneysiisay istiraatiijiyadeeda horumarineed ee waara, a ...
Kooxda R&D ee birta ka sameysan bakteeriyada bakteeriyada disha ee JISCO ayaa ku guuleysatay bilada afaraad ee May ee Gansu Youth
Maalmo ka hor, Gobolka Gansu wuxuu xusayay 102 guuradii ka soo wareegtay Shirweynihii Amaaninta Dhaqdhaqaaqa Afaraad ee Maajo iyo "Halganka Dhallinyarada ee Xisbigu ku Xoojinayo Dalka" Bandhig Faneedka Kooxda Mowduuca Cas ayaa loo qabtay si loo amaano moodellada wanaagsan iyo wakiillada moodellada ka mid ah ...
Aafada Hindiya waxay ku jirtaa xaalad deg deg ah, Jindal Stainless wuxuu bilaabay inuu oxygen ka helo dhirta Odisha
New Delhi, Abriil 27th, Jindal Stainless Steel Co., Ltd. (JSL) ayaa sheegay Talaadadii inay bilaabeen bixinta oksijiin dareere ah oo ka socota warshaddeeda Odisha xarumaha caafimaadka si loogu daaweeyo bukaannada qaba oof-wareenka cusub. Shirkadda Jindal ahama ee birta ah ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay: “Jindal S ...
Sida loo dayactiro alaabada birta aan lahayn
Horumarka dhaqaalaha, dadku waxay si dhow ula xiriiraan alaabada birta ah ee nololmaalmeedka, laakiin dad badan ayaan waxbadan kala socon waxqabadka birta birta ah, waxayna si qalad ah u aaminsan yihiin in birta birta ah aysan waligeed miridhnaan doonin. In kasta oo heerka qayilo ee ahama ...
Shiinaha Lambarka 5-aad ee Shirkadda Birta ah ayaa ku guuleysatay dalabka mashruuca qandaraaska guud ee dhismaha foornada coke ee Degmadda Waqooyiga ee Masteel
Bishii Abriil 16, Shiinaha Lambarka 5-aad ee Shirkadda Birta ah ayaa ku guuleysatay dalabkii loogu talagalay dib-u-habeynta iyo cusbooneysiinta mashruuca Coking Plant ee Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.-qeybta dhismaha foornada coke iyo rakibidda. Mashruucu wuxuu ku yaal Maanshan Birta iyo Birta Waqooyiga, Ma ...
123456 Xiga> >> Page 1 / 6